Mogadishu Journal » Man City ayaa ku guuleysatay Premier League 2020-21: Horyaalkii seddexaad afar xilli ciyaareed gudaheed Guardiola
Manchester City ayaa loo caleemo saaray horyaalnimada Premier League ka dib markii Manchester United ay guuldarro 2-1 ka soo gaartay Leicester City Talaadadii.
Luke Thomas ayaa hogaanka u dhiibay Leicester daqiiqadii 10aad markii uu ka horyimid koox wax badan ka bedeshay United, inkasta oo Mason Greenwood uu ka jawaabay shan daqiiqo ka dib, Foxes ayaa hubisay in horyaalku uu u socon doono qeybta buluugga ah ee Manchester iyadoo uu u dhaliyay Caglar Soyuncu daqiiqadii 66aad
Wiilasha Pep Guardiola ayaa haatan ku guuleystay seddex horyaal afar xilli ciyaareed gudahood, iyagoo dib u helay taajkoodii ugu horreeyay ee ay weydiistaan ​​ka dib guushii Liverpool ee 2019-20.
City ayaa awoodi weysay inay ka gudubto khadka tooska ah isbuucii la soo dhaafay iyadoo shaxdii loo baddelay ay ku dhacday 2-1 oo ay ku badisay Chelsea, inkastoo Raheem Sterling uu hogaanka u dhiibay daqiiqadii 44aad
Sergio Aguero, oo labo jeer shabaqa soo taabtay kooxdii uu ugu goolasha badan yahay, wuxuu fursad u siin lahaa inay neefsadaan qeybtii hore ee ciyaarta, lakiin waxa uu isku dayay rigoore Panenka ah.
Taasi waxay albaabka u furtay in kooxda Thomas Tuchel ay ka faa’iideystaan ​​Hakim Ziyech oo dhaliyay goolka barbaraha iyo Marcos Alonso oo waqtigii dhimashada dhaliyay.
Aguero ugu yaraan wuu isku qalbi qaboojin karaa billada shanaad ee ku guuleysta horyaalka, isagoo ku lug lahaa mid kasta oo ka mid ah guulihii Premier League.
Waxay ka dhigeysaa inay la siman yihiin Chelsea shan guul, iyadoo Manchester United 13 jeer badisay intii uu hogaaminayey Alex Ferguson ay weli siineyso fursad ay ku neefsadaan.
Guardiola ayaa kula biiray Arsene Wenger iyo Jose Mourinho seddex horyaal oo Premier League ah. Kaliya Ferguson ayaa intaas ka badan ku guuleystay, Catalan-ka ayaana ah tababarihii 12-aad ee taariikhda horyaalka heerka koowaad ee Ingariiska ku guuleysta seddex ama in ka badan oo horyaal ah.
Guud ahaan, waa markii 7-aad ee City ay hanato Horyaalka Ingiriiska, oo ay ku jiraan guulihii 1936-37 iyo 1967-68. Waxay ka dhigeysaa inay ku wada jiraan kaalinta shanaad ee kala sarreynta abid abid oo ay weheliyaan Aston Villa iyo inay ka dambeeyaan United (20), Liverpool (19), Arsenal (13) iyo Everton (sagaal).
Waqtiga casriga ah, shaki kuma jiri karo taliska City, iyadoo hanashada horyaalkeedii shanaad 10-kii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay. Kaliya Chelsea (labo) ayaa ku guuleysatay Premier League in ka badan hal jeer isla mudadaas.
Guardiola ayaa si la mid ah u taagnaan dheer dadka ay isku da'da yihiin, isaga oo leh 9 horyaal 12-kii xilli ciyaareed ee ugu sareeyay ee uu tababare ahaa - 3 midkood Barcelona, ​​Bayern Munich iyo City.
Guusha noocan oo kale ah uma muuqan mid u muuqata inay kooxdiisu ku bilaabatay carqalad 202021. Maalinta Kirismaska ​​waxay ku jireen kaalinta sideedaad waxayna sideed dhibcood ka hooseeyaan kooxda hogaanka haysa ee Liverpool.
Kaliya laba koox oo taariikhda Premier League ah (Arsenal 1997-98 - 13 dhibcood; Manchester United 1995-96 - 10 dhibcood) ayaa aad uga hooseeya Kirismaska ​​waxayna ku guuleysteen horyaalka midkoodna ma uusan yareyn siddeedaad markii ay sidaas sameeyeen.